Andao hiverina amin'ny famaritana ny marketing. Ny marketing dia ny hetsika na asa fikarohana, fandrindrana, fanatanterahana, fampiroboroboana ary fivarotana vokatra na serivisy. Media sosialy dia fampahalalam-baovao ahafahan'ny mpampiasa mamorona atiny, mizara atiny na mandray anjara amin'ny tambajotra sosialy. Ny haino aman-jery sosialy amin'ny maha-mpanelanelana azy dia tena tsy mitovy amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana noho ny antony roa. Voalohany, ampahibemaso ampahibemaso ny hetsika ary azon'ny mpivarotra anaovana fikarohana. Faharoa, ny mpampita vaovao dia mamela ny fifandraisana bi-directional - na mivantana na ankolaka.
Reputation Management - Manana marika roa eo an-toerana miara-miasa amiko aho fa nanangana fangatahana famerenana mandeha ho azy ho an'ny mpanjifany izahay. Ny fanamarihana rehetra dia angonina ary raisina, ary ny mpanjifa faly dia voatosika hizara ny heviny amin'ny Internet. Izany dia nanjary nitombo ny fahitana ny valin'ny fikarohana teo an-toerana.
fifaneraserana - Mampiasa sehatra mavitrika iray aho izay manampy ahy hahafantatra sy hifandray amin'ireo influencers sy fikambanana mety manakarama ahy ao amin'ny LinkedIn. Nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fahafahako miteny izany ary nanampy ny orinasako hampitombo ny varotra.
Tsapako fa afaka manangana fanentanana amin'ny haino aman-jery sosialy somary sarotra ianao izay mampiditra ny fampiasana sy ny mpanelanelana amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny safidiko etsy ambony. Mamoaka fampiasana ankapobeny an'ny tsirairay amin'ireo mpampita vaovao aho mba hanomezana hevi-baovao momba ny fomba hampiasan'izy ireo amin'ny fomba hafa.
Mpivarotra maro no mirona any amin'ny mpanelanelana mangatsiaka indrindra na amin'ilay ankafiziny indrindra. Ity dia lozam-pifamoivoizana miandry fa tsy manararaotra na manambatra ny mpanelanelana amin'ny fahaizan'izy ireo tanteraka izy ireo.
Hatsarao ny serivisy ho an'ny mpanjifa - rehefa miantso vonjy aminao ny mpanjifanao dia resaka 1: 1 io. Fa rehefa manantona amin'ny media sosialy ny mpanjifa dia ho hitan'ny mpijery anao ny fihetsikao sy ny valin-tenin'izy ireo. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa lehibe dia azo averina manerana ny vazan-tany… ary toy izany koa ny loza amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ampitomboy ny fampahafantarana nomerika - maninona ny atin'ny vokatra tsy misy tetikady hizarana sy hampiroborobo azy? Tsy midika akory ny fampivelarana atiny raha manamboatra azy ianao dia ho avy izy ireo. Tsy hanao izany izy ireo. Ka ny fananganana tambajotra sosialy lehibe izay ahatonga ny fiarahamonina ho mpanohana ny marika dia mahery vaika tokoa.
Mampiroborobo ny fifamoivoizana sy ny SEO - Raha mbola manilika ny rohy, ny mpankafy sy ny mpanaraka ny motera fikarohana satria antony mivantana amin'ny laharan'ny motera fikarohana, tsy isalasalana fa matanjaka Ny paikadin'ny media sosialy dia hitarika valin'ny motera fikarohana lehibe.
Hanitatra ny varotra ary hahatratra mpihaino vaovao - voaporofo izany ny mpivarotra mampiditra stratejika media sosialy any ivelany ireo izay tsy manao. Ary koa, ny olona varotrao dia mahatakatra ny fomba hiatrehana ny fanehoan-kevitra ratsy amin'ny fizotry ny varotra satria miresaka amin'ny olona isan'andro izy ireo. Matetika ny departemantanao dia tsy. Ny fametrahana ny solontenan'ny mpivarotra eo amin'ny fiaraha-monina mba hananganana fanatrehana dia fomba iray lehibe hanitarana ny tratranao.
Na dia tsy manosika ny mpanjifako hampiasa vola tanteraka amin'ny fampiharana ara-tsosialy rehetra aza aho dia mahita fiverenana mitohy amin'ny fampiasam-bola rehefa mitantana ny lazany ny mpanjifako ary manangana lanja miaraka amin'ireo mpanaraka azy amin'ny Internet. Na ahoana na ahoana, ny fanaovana tsinontsinona ny herin'ny haino aman-jery sosialy dia mety hampidi-doza amin'ny marika iray raha toa ka diso fitantanana ny olana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy ireo. Miandrandra anao ny mpanjifanao mba ho eo ary hamaly ara-potoana amin'ny sehatra media sosialy lehibe… ilaina ny fampidirana ireo fitaovana sy paikady hanaovana izany.
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho, izaho taloha dia tao amin'ny fety iray nanandrana nametraka ny sangan'asako tamin'ny mozika! Ary na dia liana aza izy ireo dia tsy ao amin'ny fomba fisainana marina, tsy toy ny rehefa eo amin'ny Internet izy ireo ary mahita ny tranokalako ary avy eo mandany fotoana hijerena ny asako, ankehitriny dia mifandray amiko ny mpanjifa.
Raha ny momba ilay horonan-tsary hampiasana ny tenanao manokana, tsara kokoa ve ny mijanona fotsiny hanoratra lahatsoratra ho an'ireo teny azo soratana sa heverinao fa hevitra mety ihany koa ny fanaovana vlogging?
Misaotra! Ny tombotsoan'ny fitorahana bilaogy miaraka amin'ny horonan-tsary mba hanomezana teny azo tadiavina dia mbola mpandresy ao amin'ny bokiko. Olona vitsy an'isa no mampiasa fikarohana video - ary ao anatin'izany dia maro no tsy mandany fotoana hamaritana tsara ilay horonan-tsary.
Ny fampifangaroana azy roa dia mahery fa kosa elaela kokoa. Ny fahafahanao mamoaka Blog Video (Podcastable), ARY ny bilaogy momba ny horonan-tsary tsirairay dia hanatsara ny fahafahanao ho hita!
Lahatsoratra tsara Doug. Nahita tompona orinasa tsy miankina be dia be aho nanararaotra ny tambajotra sosialy. Tsy vitan'ny hoe spam fotsiny izy io, fa maimbo kosa ny spam mora vidy. Ny fomba tsara kokoa dia ny manokana fotoana hananganana atiny an-tserasera (safidy tsara ny bilaogy), mamorona fahaiza-manao, maneho ny hatsaranao amin'ny asanao, ary mandresy ny valin'ny karoka.
Doug ity dia lahatsoratra tsara. Amin'ny maha orinasa Internet samihafa anay dia manandrana mitady fomba vaovao hampiasa ny media sosialy izahay hampitomboana amin'ny fomba mahomby ny varotra sy ny toeran'ny varotra. Heveriko fa nahatratra hevi-dehibe iray lehibe ianao momba ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tambajotra sosialy, zavatra heveriko fa na ny manam-pahaizana aza dia tokony tsy hadino.